Izixhobo ezi-1.500 zeebhiliyoni zika-Apple zisengozini ngenxa ye-AirDrop | Ndisuka mac
Izixhobo ezi-1.500 zeebhiliyoni zika-Apple zisengozini ngenxa ye-AirDrop
I-AirDrop ikuvumela ukuba ugqithise iifayile ngokukhawuleza nangokulula phakathi kwezixhobo ezenziwe ngophawu, ezinje nge-iPhone, i-iPad kunye neMac (phakathi kwabanye). Ukwenza oku, isebenzisa itekhnoloji yeBluetooth LE, ekuvumela ukuba udlulise, ufumane kwaye uthethathethane ngonxibelelwano. Ikwasebenzisa unxibelelwano lwe-Wi-Fi ye-point-to-point (i-Wi-Fi peer-to-peer) ukulungiselela ukuhambisa idatha. Oku kwenza ukuba ugqithiso lwefayile lukhawuleze kwaye lukhuseleke, kunye nokusebenza kwamandla. Nangona kunjalo, ayi-100% ikhuselekile njengoko kubonisiwe yi Ubungozi bufunyenwe echaphazela le nkqubo.
Nangona i-AirDrop isebenzisa iiprothokholi ezahlukeneyo kunye neendlela zokubethela ukuqinisekisa ukhuseleko lonxibelelwano phakathi kwezixhobo, iqela labaphandi lifumene isiphoso sokhuseleko esinokukhokelela Ingozi yedatha yabasebenzisi. Kufunyenwe ziingcali ezivela kwiLebhu ekhuselekileyo yeNethiwekhi yeLebhu (i-SEEMOO) kunye neQela loBunjineli boBucala (ENCRYPTO) kwiDyunivesithi yaseDarmstadt (eJamani).
Banga ukuba iApple yaziswa ngobu bungozi NgoMeyi we2019. Phantse iminyaka emibini kamva, inkampani yaseCupertino khange ayamkele ingxaki okanye acebise isisombululo. Oku kuthetha ukuba ngaphezulu kwe-1.500 yezigidigidi zabasebenzisi basesichengeni kuhlaselo lwabucala olunokwenzeka.
Oku kuthetha ukuba abasebenzisi bezixhobo ze-Apple ezingaphezulu kwe-1.500 yezigidigidi bahlala besesichengeni kuhlaselo lwabucala oluchazwe. Abasebenzisi inokukhuseleka kuphela ngokukhubaza ukufunyanwa kwe-AirDrop kuseto lwenkqubo kunye nokuyeka ukuvula imenyu yokwabelana
Ingxaki kungenxa yendlela i-AirDrop ejonga ngayo ukuba umsebenzisi ungumfowunelwa. Le yindlela yokwenza i-AirDrop ithelekise inombolo yefowuni kunye ne-imeyile yomamkeli we-AirDrop onokubakho agcinwe kwincwadi yedilesi. Nangona le datha ibhalwe ngokufihlakeleyo, iApple isebenzisa isixhobo se hash noko buthathaka. Oku kwenza ukuba abadlali ababi baveze ulwazi lobuqu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Izixhobo ezi-1.500 zeebhiliyoni zika-Apple zisengozini ngenxa ye-AirDrop
IMacOS Big Sur 11.3 RC, uphononongo lomoya, kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac